2 Ndị Eze 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 Ndị Eze 3:1-27
3 Jehoram+ nwa Ehab ghọrọ eze Izrel n’ime Sameria n’afọ nke iri na asatọ nke ọchịchị Jehọshafat eze Juda, o wee na-achị ruo afọ iri na abụọ. 2 O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova,+ naanị na ọ bụghị dị ka nna ya+ ma ọ bụ dị ka nne ya, ma o wepụrụ ogidi nsọ+ Bel nke nna ya rụrụ.+ 3 Ọ bụ naanị na ọ nọgidere na-eme mmehie niile Jeroboam+ nwa Nibat ji mee ka Izrel mehie.+ Ọ hapụghị ya. 4 Ma Misha+ eze Moab ghọrọ onye na-akpa atụrụ, ọ na-ejikwa otu narị puku ụmụ atụrụ na otu narị puku ebule a na-akpachaghị ajị akwụ eze Izrel ụgwọ. 5 O wee ruo na ozugbo Ehab nwụrụ,+ eze Moab malitere inupụrụ eze Izrel isi.+ 6 N’ihi ya, Eze Jehoram si na Sameria pụọ n’ụbọchị ahụ wee kpọkọta+ Izrel dum. 7 Ọ gakwuru n’ihu izigara Jehọshafat eze Juda ozi, sị: “Eze Moab enupụworo m isi. Ị̀ ga-esoro m gaa Moab ibu agha?” O wee zaa, sị: “M ga-aga.+ Mụ na gị bụ otu; ndị m na ndị gị bụ otu;+ ịnyịnya m na ịnyịnya gị bụ otu.” 8 O wee gaa n’ihu ịsị: “Olee kpọmkwem ụzọ anyị ga-esi gbagoo?” O wee sị: “Ọ bụ n’ụzọ ala ịkpa Idọm.”+ 9 Eze Izrel na eze Juda na eze Idọm+ wee gawa, ha nọkwa na-aga gburugburu ruo ụbọchị asaa, e nweghịkwa mmiri maka ndị agha ha nakwa maka anụ ụlọ ndị so ha. 10 N’ikpeazụ, eze Izrel sịrị: “Lee ihe ndabara ọjọọ ọ bụ na Jehova akpọwo ndị eze atọ a ka o nyefee ha n’aka Moab!”+ 11 Jehọshafat wee sị:+ “Ọ̀ bụ na e nweghị onye amụma Jehova+ n’ebe a? Ka anyị jụọ Jehova ase site n’ọnụ ya.”+ Otu n’ime ndị na-ejere eze lzrel ozi wee zaa, sị: “E nwere Ịlaịsha+ nwa Shefat n’ebe a, bụ́ onye wụsara mmiri n’aka Ịlaịja.”+ 12 Jehọshafat wee sị: “Okwu Jehova dị n’ime ya.” Eze Izrel na Jehọshafat na eze Idọm wee gakwuru ya. 13 Ịlaịsha wee sị eze Izrel: “Gịnị jikọrọ mụ na gị?+ Gakwuru ndị amụma+ nna gị na ndị amụma nne gị.” Ma eze Izrel sịrị ya: “Ee e, n’ihi na Jehova akpọwo ndị eze atọ a ka o nyefee ha n’aka Moab.”+ 14 Ịlaịsha wee sị: “Dị nnọọ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha dị ndụ,+ bụ́ onye m guzo n’ihu ya, a sị na ọ bụghị n’ihi ihu Jehọshafat eze Juda,+ agaraghị m ele gị anya ma ọ bụ hụ gị.+ 15 Kpọtaranụ m onye na-akpọ ụbọ akwara.”+ O wee ruo na ozugbo onye na-akpọ ụbọ akwara kpọrọ ụbọ akwara, aka+ Jehova dịkwasịrị ya. 16 O wee sị: “Nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Ka e mee ka ndagwurugwu a jupụta n’olulu;+ 17 n’ihi na nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Unu agaghị ahụ ifufe, unu agaghịkwa ahụ oké mmiri ozuzo; ma ndagwurugwu ahụ ga-ejupụta na mmiri,+ unu ga-aṅụ mmiri ya,+ unu na anụmanụ unu nakwa anụ ụlọ unu.”’ 18 Nke a ga-abụ obere ihe n’ezie n’anya Jehova,+ ọ ga-enyefekwa Moab n’aka unu.+ 19 Bibienụ obodo niile e wusiri ike+ na obodo niile mara mma, unu ga-egbutukwa osisi+ niile dị mma,+ unu ga-asụchikwa isi mmiri niile, unu ga-ejikwa nkume mebie ibé ala ọ bụla dị mma.” 20 O wee ruo n’ụtụtụ,+ n’oge e ji achụ àjà ọka,*+ lee! mmiri si ná mpaghara Idọm na-asọdata, ala ahụ wee jupụta na mmiri. 21 Ma ndị Moab niile nụrụ na ndị eze ahụ agbagotewo ibuso ha agha. Ha wee kpọkọta ndị ikom, malite ná ndị niile na-eke ájị̀ n’úkwù+ gbagowe, ha wee guzo n’ókè nke ala ha. 22 Mgbe ha biliri n’isi ụtụtụ, anyanwụ chakwasịrị mmiri ahụ, nke mere na ndị Moab nọ n’akụkụ nke ọzọ hụ ka mmiri ahụ chara uhie uhie dị ka ọbara. 23 Ha wee malite ịsị: “Lekwanụ ọbara! Ọ ghaghị ịbụ na e nyefewo ndị eze ahụ n’aka mma agha, ha wee na-egburịta ibe ha. Ya mere, Moab, gaa kwata ihe!”+ 24 Mgbe ha batara n’ebe Izrel mara ụlọikwuu, ndị Izrel+ biliri ozugbo malite igbu ndị Moab, nke mere na ha si n’ihu ha gbaa ọsọ.+ Ha wee bata na Moab, gburu ndị Moab na-abịa. 25 Ha wee kwatuo obodo ndị dị n’ime ya,+ onye nke ọ bụla wee na-atụba nkume ya n’ibé ala niile dị mma, ha wee tụjuo ya; ha na-asụchikwa isi mmiri niile,+ ha na-egbutukwa osisi ọma niile,+ ruo mgbe ha hapụrụ naanị nkume Kia-hareset+ na ya; ndị na-agba èbè wee malite ịga ya gburugburu wee gbatuo ya. 26 Mgbe eze Moab hụrụ na agha ahụ siiri ya ike nke ukwuu, ozugbo ahụ, ọ kpọọrọ narị ndị ikom asaa ndị na-ebu mma agha ka ha wabakwuru eze Idọm,+ ma ha enweghị ike ya. 27 N’ikpeazụ, ọ kpọọrọ ọkpara ya bụ́ onye gaje ịchị n’ọnọdụ ya wee chụọ ya n’àjà+ n’elu mgbidi dị ka àjà nsure ọkụ. E wee weso Izrel oké iwe, nke mere na ha kwụsịrị ibuso ya agha wee laghachi n’ala ha.
2 Ndị Eze 3